न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने कि विधिसम्मत उपचार खोज्ने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ श्रावण १३, मंगलवार ०६:२४:००
काठमाडाैँ-नेपाली समाजको एउटा चरित्र छ, कसैले कागले कान लग्यो भनिदियो भने आफ्नो कान नछाम्ने, कागको पछि दगुर्ने । यो चरित्र बुझेका छट्टुहरुले बेलाबेला फाइदा उठाइरन्छन् । अनि घानमा निर्दोषहरु परिरहेका छन् ।
अहिले न्यायपालिकाको हकमा त्यही भइरहेको छ ।
रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएको र हिट एन्ड रन काण्डका अभियुक्त धरौटीमा छाडिएको प्रकरणलाई लिएर यतिखेर न्यायालय बहसमा छ ।
खुला समाजमा बहस हुनु नराम्रो होइन । बहसले सार्थक निष्कर्ष र नतिजा दिन सकेमा न्यायालय र विधिशास्त्र दुवैलाई गुन लाग्नेछ । तर बहसका नाममा संस्थाविरुद्ध आक्रमण गर्यौँ भने कहाँ पुगिन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले बाहिर आएका प्रकरणमा जुन टीकाटिप्पणी भएका छन्, ती वस्ततुः अहिलेकै प्रकरणको प्रतिक्रिया मात्रै होइनन् । समग्र न्यायपालिकाप्रतिको आमधारणा व्यक्त भएको हो । हाम्रो न्यायालय ठीक दिशातिर गइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको मोटो जवाफमा कसैले पनि ठीक भन्ने छैनन् । तर यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन कसले भूमिका खेल्यो त ? यस विषयले भने गम्भीर बहसको माग गर्दछ ।
आज न्यायपालिका प्रमुखमा चोलेन्द्रशमशेर राणा छन् । यतिखेर उठेका विवादमा उनलाई जवाफदेही बनाउन सकिएला । तर विगतदेखि नै न्यायपालिकाको छविमा आँच आउने काम जजसले गरे, त्यसको अपजसको हिस्सेदार तिनलाई बनाउने कि नबनाउने ? आजको ज्वलन्त प्रश्न यो हो ।
हिजो केही न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरु आफू हिरो हुने नाममा लहडमा निर्णय र नियुक्ति गरे । कामभन्दा बढी भाषणाबाजि गरे । त्यसले न्यायका उपभोक्ताको बानी बिगारे ।
न्यायालयले सजाय तोक्छ, घटाउँछ, बढाउँछ र कतिपय अवस्थामा गम्भीर अभियोगबाट सफाइ समेत दिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्न कसैले सिकाएनन् । तल्ला अदालतका निर्णय माथिल्ला अदालते सच्याउँछ । यो सामान्य विधिशास्त्रीय प्रक्रिया नै हो । यसलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्ने समाज बन्न सकेको छैन ।
हाम्रो प्रहरी प्रशासन हेरौँ । सरकारी वकिलका कामकारवाही हेरौँ । तिनले गर्ने हरेक कार्य दोषरहित छन् ? त्रुटिरहित छन् ? अन्य देशमा प्रहरीले दिएका प्रतिवेदन न्यायालयले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेका छन् ? एकपटक प्रमाणित भइसकेको अपराधीले प्रायश्चित गर्न पाउने कि नपाउने ? उसका दैनिक व्यवहार र आचारणलाई लिएर सुधारको मौका दिने कि नदिने ? एकपटक पाएको सजायमा पुनर्मूल्यांकन हुने कि नहुने ? यदि नहुने हो भने संविधानमै लेखौँ । दसैँ, गणतन्त्र दिवस र अन्य अवसरमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा दिने व्यवस्था पनि हटाऔँ । एक तहको अदालतले गरेका फैसलाको पुनरावेदन र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरौँ । होइन भने अदालतलाई काम गर्न दिऊँ ।
देशलाई पुलिस स्टेट बनाउन खोजिएको हो भने न्यायालय खारेज गरौँ । प्रहरीले जे राय पेस गर्छ, त्यसैलाई फैसला मानिदिऊँ । यो छिटो पनि हुन्छ । तत्काल अनुभूति हुने काम पनि यसले गर्छ । तर प्रहरीका काम कारवाहीको पनि स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने मान्ने हो भने अदालतका निर्णय मान्नैपर्छ । प्रहरीका रायभन्दा फरक कुरा फैसलामा हुन्छ भने त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ ।
न्यायको पक्ष लिएजसरी न्यायकै हुर्मत लिने काम गरिरह्यौँ भनेचाहिँ हामी सही गतन्व्यमा पुुग्ने छैनौँ । हाम्रो गन्तव्य विधि र पद्धतिलाई समृद्ध बनाउने हुनुपर्छ । कमीकमजोरी भएका छन् भने पद्धतिभित्रैबाट सुधार गरिनुपर्छ । पद्धति नै खराब भए त्यसमा सुधार खोजिनुपर्छ । सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरिसकेपछि त्यसलाई विधिसम्मत् तवरले निरुपण गर्न दिने कि अदालतले यसै गर्नुपर्छ भनेर सडकमा नाराबाजि र संसदमा हंगामाबाजी गर्ने ?
कतिपयलाई मौका यही हो भन्ने शैलीमा राजनीतिको रोटी सेक्नुपरेको छ । जनताको घरदैलोमा गएर आफ्ना कृत्रिम नारा बेच्न नसकेकाहरु सस्ता नारा र प्लेकार्ड लिएर अहिले माइतीघर मण्डलामा उभिने उपायमा लागेका छन् । यिनको उद्देश्य पद्धति सुधार र समृद्ध बनाउने होइन । परिस्थितिलाई गिँजोलेर आफ्नो भूमिका देखाउने हो । यस्ता तत्वबाट न्यायालय जोगाउनु आवश्यक छ ।
एकाध घटनालाई लिएर पद्धतिमाथि नै प्रहार गर्ने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्ने छैनौँ । कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका सिलसिलामा खराब नियत नराखेरै पनि भाषिक र प्राविधिक त्रुटि गर्न सक्छन् । त्यसैमा रहेर सारा अदालतलाई पंगु सावित गर्ने प्रयास हुनु अर्को दुःखद् पक्ष हो । जुन हदसम्मको त्रुटि हो, त्यसको पनि उपचारको विधि छ । विधिअनुसारको उपचार गरिएमा सही नतिजा हात लाग्न छ । मुटुको शल्यक्रिया बञ्चरोले गर्न थालेमा नतिजा के हुन्छ ? न्यायालयका सन्दर्भमा पनि यो कुरा मनन गर्नुपर्छ ।
कचिंगलपूर्ण दाम्पत्यका बीच उत्पन्न भएको दुःखद् परिस्थितिलाई लिएर साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका रञ्जन कोइरालालाई थुनिराख्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा अदालत र इजलासभित्रै बहस हुने अझै पनि प्रशस्त ठाउँ छ । समय छ । यसको प्राज्ञिक तहमा पनि अध्ययन होस् । दुईजनाभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा गरमागरम बहस होस् । यो स्वाभाविक पनि छ । तर अदालतभन्दा बाहिरबाट धारे हात लगाउन थालेमा त्यसले अराजकतालाई मात्र मलजल गर्नेछ ।
कतिपयलाई त अहिले भएका सबै संस्था र संरचनाप्रति घृणा उत्पन्न गराएर आफ्नो व्यवसाय अभिवृद्धि गर्नु छ । तिनैसँग बहकिँदै जाने हो भने पुगिने ठाउँ भड्खालो मात्र बाँकी छ । त्यसैले न्यायको पैरवी गर्दा न्यायालय चाहिन्छ भन्ने कुराको न्यूनतम बुझाइ सबैमा हुनु आवश्यक छ । न्यायालयको संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी राजनीतिक नाराबाजी र ढुंगामुढातर्फ लागेमा भोलि न्याय माग्न जाने ठाउँ पनि बाँकी रहने छैन ।